नागरिकताबारे यस्तो बन्यो सहमती, अब यसरी पाइन्छ नागरिकता ! - Sidha News
नागरिकताबारे यस्तो बन्यो सहमती, अब यसरी पाइन्छ नागरिकता !
काठमाडौ। अबदेखी बाबु एकीन नभएका सन्तानले आमाको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा आमाको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता दिलाउने सहमति भएको हो ।
बलात्कार, लिभिङ टुगेदर वा अरु परिस्थितिमा जन्मिएका सन्तानले आमाको घोषणाबमोजिम नागरिकता पाउनेछन्। तर, नियतवस आमाले ढाँटेर बाबुको नाम, ठेगाना फरक बनाइ नागरिकता दिलाइएमा त्यस्ता आमालाई कारबाहीको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
सभापति श्रेष्ठले नेकपा सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल सुरु भएको बताइन्।
स‌ंसद्‌मा पुगेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका केही बुँदामा अझै सहमति जुटेको छैन। नागरिकता टोली खटाएर दिने कि नदिने, अंगिकृतलाई कति वर्ष बसोबास गरिसकेपछि दिने, २०६४ अघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई के गर्ने जस्ता विषयमा विवाद छ। नागरिकता टोली खटाउँदा दुरुपयोग भएको भन्दै केही सांसदले विरोध जनाइरहेका छन् भने अंगीकृत नागरिकता दिँदा ७ वर्षको सरकारी प्रस्वावका विषयमा समितिमा सहमति बन्न सकेको छैन।